Akụkọ - Kedu uru nke iji ihe dị iche iche maka igwe ọrụ buru ibu
Kedu uru nke iji ihe dị iche iche maka ịkwanye nnukwu igwe
Iji nwee ike ịchọta ihe ndị dị mkpa nke ndị ahịa ya n'oge ọrụ nke nnukwu ígwè ọrụ, a ga-edozi ihe eji arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ edozi na akụrụngwa igwe n'oge eji ya. Iji zere ndị workpiece n'oge machining usoro. Mgbe ikike ndị ọzọ dị ka mgbatị na ike ndọda metụtara ngbanwe ahụ, a ga-eji ụfọdụ mpempe aka kpuchie ihe arụ ọrụ iji mee ka ọnọdụ ya gbanwee. Kedu uru nke iji ihe dị iche iche maka ịkwanye nnukwu igwe?
Uru nke iji Q235A (A3 nchara) maka nnukwu igwe
Ndị isi uru nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ machining arụmọrụ bụ na ọ nwere nnukwu plasticity, ike na ịgbado ọkụ arụmọrụ na a ụfọdụ larịị. Dum ngwaahịa nwere ụfọdụ zọ arụmọrụ na oyi na-atụ ekwe arụmọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe maka ihe achọrọ mgbe eji ya. N'ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche na akụkụ nke akụkụ welded, dị ka mkpara agbụ, njikọ njikọta, atụdo, akụ, kposara, akụ, brackets, bases, wdg.
Uru nke iji 40Cr maka igwe nha
Igwe na-ebu oke buru ibu ga-enwe ezigbo akụrụngwa akụrụngwa, mmetụta dị ala dị ala, ike na-adịchaghị mma na ịdị ike ọfụma ruo n'ókè ụfọdụ mgbe ịkwụsị na iwe. Enwere ike ịnweta ike dị elu mgbe mmanụ dị jụụ, akụkụ ya na-adịkarị mfe mgbawa mgbe mmiri jụrụ. Mgbe iwe na-ewe iwe ma ọ bụ na-agba ume ma na-ewe iwe, ígwè ọrụ ahụ dị mma, mana ịgbado ọkụ adịghị mma na mgbawa dị mfe ịme.
Mgbe a na-eji igwe ahụ eme ihe, a na-ejikarị ya eme ihe maka ngwa ngwa ngwa ngwa na-arụ ọrụ n'ichepụta ihe mgbe imenyụ na iwe ọkụ, dị ka ngwa ọrụ akụrụngwa ya, akụ, ikpuru, wdg. eji rụpụta akụkụ nwere oke ike ma na-eyi nguzogide, dị ka gia, akụ, spindles, crankshafts, spindles, aka uwe, atụdo, njikọ mkpara, wdg.
Mgbe imenyụ na iwe iwe na-ajụ oyi, a na-eji ya arụpụta ọrụ dị arọ, ọkara ọsọ na-akpụ akpụ akụkụ, dịka mmanụ mgbapụta mmanụ, sliders, gia, spindles, wdg. rụpụta ọrụ dị arọ, mmetụta dị ala, akụkụ arụ ọrụ na-eguzogide ọgwụ, dị ka ikpuru, spindles, na shafts. N'ebe a na-enye carbonitriding, a ga-arụpụta akụkụ nnyefe nwere akụkụ buru ibu ma sie ike dị elu, dị ka akụ, gia, wdg.
Uru nke iji 45 # maka nnukwu nhazi
45 # bụ elu-edu carbon bughi, na ugbu a bụ ndị akacha eji carbon-emenyụ ma nwee ume nchara.
N'ime usoro ọrụ, ọ ga-enwe ezigbo akụrụngwa akụrụngwa. Ọ nwere obere hardenability n'oge ojiji na-adịkarị mfe cracks n'oge mmiri quenching. The ịgbado ọkụ akụkụ kwesịrị preheated tupu ịgbado ọkụ na annealed mgbe ịgbado ọkụ.
A na-ejikarị ya eme ihe: imepụta akụkụ dị elu na-arụ ọrụ dị ike, dịka impellers, pistons, shafts, gears, racks, worms, wdg.